Zvemukati Sayenzi: Anonamira maLinks | MarTech Blog
Zvemukati Sayenzi: Shandura yako Plain Jane zvinongedzo kuva Muurayi Contextual Zvemukati
Muvhuro, Ndira 11, 2010 Svondo, October 4, 2015 Taulbee Jackson
Chii chinoita iyo Washington Post, BBC News, uye New York Times takafanana? Ivo vari kuvandudza iyo yemukati mharidzo yezvisungo pamawebhusaiti avo, vachishandisa chishandiso chinonzi Apture. Panzvimbo pekungoita zvimisikidzwa zvemavara zvinongedzo, maApture zvinongedzo zvinotangisa pop-up hwindo pane mbeva pamusoro iyo inogona kuratidza dzakasiyana siyana zvine hukama nezvirimo.
Padivi rekushambadzira, Apture inoita kuti zvive nyore kwazvo kune vanyori kuti vawane, batanidza, uye varatidze zvine chekuita nazvo mumablog avo. Simply ratidza iwo mavara iwe aunoda kubatanidza, uye nekudzvanya kamwe chete, iyo Apture plugin - iyo inowanikwa pane ingangoita chero inozivikanwa online kushambadzira chikuva - inotsvaga internet kune akasiyana akasiyana mafomu akasiyana ezviratidziro zvine hukama zvemukati, uye inoshandura zvinyorwa zvako kuita akapusa, anobatsira akapfuma enhau
Imwe yemabhenefiti kune vaverengi vako ndeye kukurumidza kuwana kune mamwe mabheti eruzivo. Kusimudza pamusoro pezvikwata zvinoratidzira zvishoma pop-up hwindo iro rinoratidza zvemukati zvakanangana zvakananga netemu. Iyi inogona kunge iri vhidhiyo yeYouTube, yeWikipedia kupinda, kana kunyange chaiyo-nguva yekutsvaga kweTwitter
Kazhinji, izvi zvinongedzo zvinogona kutora vashandisi kure nepositi yako, kunyangwe ivo vaingoda kuwana nekukurumidza ruzivo. Panzvimbo pekugona kutumira mushandisi kune imwe saiti, Apture nekukurumidza uye zvine mutsindo zvinoratidza zvirimo mushandisi angangoda kuongorora, uye muchokwadi, anoedza kugadzirisa kufarira kwavo kana kubvunza kwavo mukati mepositi yako pachayo.
Pfungwa iri shure kweApture ndeyekuita kuti zvawatumira zvinyanye kunamira, uye zvinofanirwa, zvichitaurwa, kuwedzera nguva panzvimbo - chakakosha kuita metric kune vazhinji vatengesi vemakambani.
Uye kune ese analytics junkies kunze uko, iwe unogona kuteedzera zvinongedzo kuburikidza neApture's analytics service mune yakabhadharwa vhezheni. Ziva kuti nepo mapuratifomu ekuburitsa epuratifomu eApture achigadzira zvinongedzo izvo Google inoona seyakajairika maLinks ekare, iyo browser yebrowser haina kuburitsa zvinongedzo zvinozivikanwa neinjini dzekutsvaga.
Tiri kushandisa iyo WordPress vhezheni yeApture pane yazvino iteration yedu Blog, uye sekambani iyo zvinongo gadzira zvemukati - zuva rese, zuva rega rega - kusvika pari zvino, tinochida chaizvo. Vese vagadziri vedu vezvinhu vakave nezvinhu zvakanaka zvekutaura. Izvo zvinobatsira kugadzira zvinonakidza uye zvinoenderana nezvinyorwa, uye zvinobatsira kunze zvishoma nekugadzira nyowani zvemukati zvemukati mazano - uye kugadzira iwo mazano isu atove tatova nezvakawanda zvekuita kune mushandisi.
Edza demo reApture pane yavo saiti - zvinoita kuti izvo zvemukati zvinakidze, uye yako blog ibudirire.
Tags: apturewatinyabatanidza tinyaLinkskuita mari zvinongedzokubhadharwa watinyapopup chinongedzochinamatira chinongedzo
Taulbee Jackson ndiye Mutungamiri / CEO weRaidious Digital Content Services.
Raidious ikambani yekushambadzira yedhijitari yakavakirwa kugadzira, kubata, kuongorora, kuenzanisa uye kuyera zvemukati zvemukati uye dialog munguva chaiyo, vachishandisa timu yemagadzirirwo, vanyori, vapepeti, vagadziri, uye vatori venhau vanoshanda zvakanyanya senge CNN nhau timu yezvigadzirwa. Tsvaga zvimwe pa raidious.com.
Chidiki Webhu Dhizaini Shanduko ine Hukuru Impact
Jan 12, 2010 pa 12: 16 AM
Iko kusununguka uko iyo Apture inosanganisa ruzivo is spooky nekukurumidza! Wow - inoshamisa application. Zvinotaridza senge inoshamisa nzira yekusimudzira zvirimo asi, pamwe, zvimwe zvinowanda kana paine zvinongedzo kwese kwese nzvimbo. Ini ndinogona kuve neshungu yekuona kuti zvinokanganisa sei nguva pane peji, bounce mitengo uye shanduko!
Kutenda nekugovana - inoshamisa tekinoroji. 😎
Jan 12, 2010 pa 12: 31 AM
Zviri nyore kutakurwa nematoyi matsva. . . kwete kuti ndaizombozviita. . . 😉
Isu takaita Apture pakati paDecember, uye nekukurumidza kutarisa kwedu analytics inoratidza yakawanda avhareji maonero peji, yakaderera bounce mitengo, uye yakawanda nguva pane saiti - asi bhurogu yedu iri diki irinani, izvo zvinogona kuve zvezvikonzero zvakasiyana zvikonzero, zvingangoita kungoita shanduko yeblog. (inogona kunge iri yezviri mukati, zvakare.. 😀)